Ingabe akulungile ukuthukuthela uNkulunkulu? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Ingabe akulungile ukuthukuthela uNkulunkulu?
Wonke umuntu unelungelo lokuzwa imizwa yakhe kepha kufanele uhlale wazi impande yolaka lwakho futhi uyiqondise ngokufanele.
Kwesinye isikhathi, ukuzithukuthelela kuyindlela edingekayo yokuthola i- Okwangempela. Inkinga ukuthi le ntukuthelo ingahle isuswe kuwe isole uNkulunkulu.
Isibonelo, uKristen ushayela ekhaya evela kumngane wakhe lapho imoto yakhe iphuka. Ekhungathekile, ubheka phezulu esibhakabhakeni bese ememeza, “Kungani ungenzela lokhu ?!” Ngokungamazi uqobo Lwakhe, kwenza kube nzima ngoKristen ukubona ukuthi ubephethe icala. Imoto yakhe ibisebenza amasonto amaningi futhi wezwa ukuthi ukunakekelwa kwayo bekunganakwa. Lokhu kubonise ukwehluleka kwemishini. UKristen uzama ukumisa imoto futhi futhi iyasebenza. Ngenkathi eshayela ekhaya, udlula enganakile engazi ukuthi ngabe ubebandakanyeka kuyo ukube imoto yakhe ibisebenza kahle. Empilweni, izimo zingabonakala zingahleliwe futhi zingahambi kahle kepha kunesizathu nenjongo yakho konke.
Kodwa ingabe unendaba
Kuzungezwe ukuphelelwa yithemba
Kungani impilo ingalungile
kepha angikaze ngibe lapho
kepha thola izitebhisi ezijikelezayo
njengoba ulaka lwami luvutha
Iyasha ngemithambo yami futhi iphakamisa izinwele zami
kodwa bheka umoya kuphela
manje yazi ukuthi sihlanganyela ini
Njengoba ngibheka amehlo ami
ngokushesha ukuthola ukugqolozela kwakho
Amathegiintukuthelo ukuqonda uNkulunkulu ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya